Gazety-Boky ‘Cholita’ Hoan’ny Vehivavy Teratany Malaza ao Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2015 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, Türkçe, Deutsch, Italiano, русский, Ελληνικά, Español
Cholitas, Bolivia. Sary ao amin'ny Flickr avy amin'ny mpisera Lemurian Grove (CC BY-NC 2.0).
Ny rakibolan'ny Akademiam-Pitondram-panjaka Espaniola no mamaritra ny voambolana cholo na chola eo amin'ny teny iditra voalohany ho “olona metisy manana rà Eoropeana sy Vazimba Teratany.” Raha miaraka amin'ny tovana espaniola -ita ny voambolana dia lasa cholita, tenim-pitiavana ampiasaina amin'ny vehivavy teratany Aymara any Bolivia izay mpanao satroka boribory kely sofina, raoby sy zipo miavaka ary lambam-behivavy marevaka, miaraka amin'ny volo mirandrana mizara roa mankany an-damosina.
Nanivaka io voambolana io tamin'ny voalohany, voambolana nilazana ireo vehivavy teratany nifindra nankany an-tanandehibe ka nanaraka ny fomba fiainan'ireo metisin'ambonivohitra, saingy ankehitriny izy io milaza ny vehivavy teraka tao La Paz izay maka ny mari-panondroana mahametisy azy.
Hatramin'ny 2014, ny Cholita ihany kosa dia anaran'ny gazetibokin-damaody iray ao Bolivia. Efa nantsoina izy io hoe “Vogue Andeana,” ary ny mpamaky nokinendry dia ny vehivavy teratany izay mitafy ara-pomban-drazana ary mihamiharihary sy mihamatanjaka ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina.
Ny tonia Ester Chaym no nanazava tao amin'ny antsafa tamin'ny sampam-baovao espaniola EFE tamin'ny Oktobra 2014 fa raha nifantoka fotsiny tamin'ny lamaody ny gazetiboky, dia mety ho nankaleo ireo “vehivavy mpandray raharaha an-tanana, miasa mafy, kinga ary zatra manombo-javatra vaovao.”
Araka ny volazan'ny lahatsoratra, izay notsimponin'ny fampitam-baovao nanerana ny tontolo mpiteny espaniola, dia tamin'ny jolay 2014 no nivoaka voalohany ity gazetiboky mivoaka isam-bolana ity. Nanazava i Chaym:
Ity gazetiboky iray izay manolotra ny fitantanandreny ho azo atao safidy faharoa mba hahatonga izao tontolo izao ho toerana feno fanambinana sy faly, izao angamba ny fotoana hanovan-javatra mba hahatonga ny vehivavy hanana ny fahefana.
Nozarainy ihany koa ny hevitra nipoiran'ny fivoahan'ny gazetiboky:
Nahatsiahy i Chaym fa ny hevitra nahatonga ny famoahana gazetiboky amin'ireo toetra manavaka azy ireo dia nalaina avy amin'ny fihetseham-po tsy voatanan'ny vehivavy alemana iray, raha tonga tany Bolivia ka nahita ireo vehivavy nitafy ny lambam-behivavy ara-pombandrazana, zipo sy satroka boribory kely sofina, dia nihoraka hoe: ” feno printsesy ity firenena ity!”
Ny ekipa mandrafitra ny famelomana ity gazetiboky ity dia vondrona cholitas iray mizara ny toe-javatra iaianan'izy ireo.
Tao amin'ny Twitter, nanana ny akony ny vaovaon'ny gazetiboky tamin'izany fotoana:
Navoaka ao Bolivia ny ‘Vogue Andeana’ ahitana fanorotoroan-damaody hoan'ny cholitas.
Eto Bolivia, teraka ny ‘Vogue Andean’ hoan'ny vehivavy teratany.
Gazetiboky Para Ti hoan'ny cholitas Boliviana. Hangoniko hotehirizina.
Vogue Andeana … zazasary ianareo. #Cholitas
Lasa mpanjakavavin'ny lamaody ankehitriny ny Cholitas: indro ny “Vogue” boliviana vaovao.
Tamin'ny Novambra 2013 ny fiadidiana ny tanànan'ny renivohitra boliviana La Paz no nanambara ny cholita ho “vakoka ara-kolontsaina tsy azo tsapaina” an'ny tanàna.